तीन युवतीको रोजाई एउटै केटा , पायो कसले ? ( भिडियो हेर्नुस्) « रंग खबर
तीन युवतीको रोजाई एउटै केटा , पायो कसले ? ( भिडियो हेर्नुस्)
रंग खबर, काठमाण्डौं । विश्वमा प्रेमका कारण धेरै मित्रताहरु तोडिएका छन् । सबैको रोजाई एउटै मान्छे भइदिदा मित्रता नै दुश्मनीमा परिणत भएका धेरै उदाहरण छन् । यस्तै एक कथामा म्यूजिक भिडियो निर्माण भएको छ ।
यु आर स्टाइल इन्टरटेन्मेन्ट टिमले बनाएको यस म्युजिक भिडियोलाई रुपेश थापाले खिचेका हुन्, भने नन्दा अधिकारीको मेकअप रहेको थियो । म्युजिक भिडियोमा नमित चन्दले सहायक निर्देशन गरेका छन् ।